Diyo post :: महिलाले अफिस र बच्चाको रेखदेख कसरी गर्ने ? महिलाले अफिस र बच्चाको रेखदेख कसरी गर्ने ? - Diyo post
महिलाले अफिस र बच्चाको रेखदेख कसरी गर्ने ?
काठमाडौ १७ जेठ- काममा व्यस्त महिलालाई प्राय आफ्नो काम वा घर व्यबहार मिलाउन एकदम गाह्रो पर्ने हुन्छ । जहाँ सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ अफिस र यसको साथसाथै बच्चाबच्चीको जिम्मेवारी । बदलिदो समयसंगै यी र यस्तै कुराको व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो पर्न जान्छ । तर केहि कुरा ध्यानमा राख्न सक्यो भने सजिलै अफिस र अभिभावक दुवैको जिम्मेबारी निभाउन सकिन्छ ।
आफु अनुकुलको अफिस रोज्नुस्
तपाई आफ्नो कार्यालयलाई कत्तिको समय दिनुहुन्छ ?अफिस प्रति एकदमै लचिलो हुनुहुन्छ कि, जहा आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी पनि सजिलै निभाउन सकिओस् । अफिसको समय पनि लचिलो होस.् । ताकी तपाईलाई समस्या पर्दा बुझिदिने खालको होस् ।
संतुलित काम रोज्नुस्
हाम्रो समाजमा महिलालाई घरभित्र र बाहिर दुबै तिर काममा व्यस्त भएर लागेको देखिन्छ । घरको झन्झट होस अथवा अफिसको कामप्रति लगाव । कारण जेसुकै होस् र सोच्नुस की आफु कस्तो काम संगै गर्यो भने बच्चाको रेखदेख र परिवार संगसंगै कस्तो अफिसको काम गर्न लायकको छु भनेर । अनि मात्र अफिस र परिवार दुवैको जिम्मा लिन सजिलो हुन्छ ।
योजनाबद्ध ढंगले काम गर्नु यतिकै पनि राम्रो मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा कामदार महिलाले त अझै आफ्नो हरेक काम योजनाबद्ध तरिकाले गर्नुपर्दछ । आफुमा कामको चाँप एकदमै कम पार्नको लागी हरेक कामको योजना बनाउनुपर्दछ र सोहीअनुसार काम गर्नुपर्दछ । यसरी कामको चापमा कमी आउनुका साथै समयको पनि बचत हुन्छ ।
सहयोग लिनमा अप्ठेरो नमान्नुस
तपाई घरमा होस् वा अफिसमा, कुनै पनि कामको सहयोग लिनमा अप्ठेरो नमान्नुस् । यसरी सहयोग मागेर सहकार्यमा काम गरेमा काम चाडै सिधिने हुन्छ । साथै आनन्द पनि महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले घरका सदस्य तथा आफ्ना सहपाटीहरुसंग सहयोग लिन नहिच्कीचाउनुस् ।
सप्ताहमा फ्री रहनुहोस
तपाईको काम छ भने तपाईको लागी सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो हप्ताको अन्तिम दिन अथवा छुट्टीको दिन । हप्ताको यो एकदिनलाई आफ्नो बालबच्चा वा परिवारको लागी छुट्याइदिनुस् । किनभने हरेक बच्चाहरुलाई आफ्नो ड्याडी मम्मीसंग छुट्टी मनाउने रहर हुन्छ ।
आफ्नो छोराछोरीसंग निरन्तर कुरा गर्नुस्
प्राय यस्तो देखिन्छ कि जसको ड्याडि मम्मी दुवै काममा व्यस्त हुन्छन् र उनीहरुको पढाई प्रतिको ध्यान भंग हुने हन्छ । जहाँ उनीहरु माथी नराम्रो छाप बस्न जान्छ । त्यसैले यसमा हरेक ड्याडि मम्मीको जरुरी हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरीलाई मानसिक दबाब नदि उनीहरुसंग खुलेर कुरा गर्नु ।